Nin Naaga Doon Qabo Naag ii doon lama yiraa, Nin Xildoon ahna Xil ila doon lama yiraa=Nasashada Jimcaha.Q-159aad=. | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Nin Naaga Doon Qabo Naag ii doon lama yiraa, Nin Xildoon ahna...
Nin Naaga Doon Qabo Naag ii doon lama yiraa, Nin Xildoon ahna Xil ila doon lama yiraa=Nasashada Jimcaha.Q-159aad=.
1-Nin ayaa yiri: Maanta Qaboow ayaa jira, waxaana ku ogaaday waxaan arkay Xildhibaanka Beesheeyda oo Jeebka Gacanta Galinayo. ( F.S: 1aad)
(Xildhibaanoow, haddad dhaxamooto oo kaliya Jeebka gacanta ha galin, waa la Fahmay in Gacantaada iyo Jeebkaagu ay Col yihiin, ee Jeebka gacanta Gali, Masaakiinta Qaraabadaana wax ku Sadaqeyso)
2-Labo Xaaji oo Somaali ah oo Xajka Dayaarad u saaran ayaa waxaa la soo fadhiistay Xaaji kale oo Itobiyaan ah oo Xajka u socdo. Mid ka mid ah Labadii Xaaji ee Somalida ayaa istaagy oo yiri: waxaan soo qabsanayaa Cabitaan “FANTA” ah, kii Itobiyaanka ayaa yiri: iska joog Qof weyn ayaad tahay Anigaa kaaga soo qaadayo Gabdha shaqaalaha ka ah Dayaaradda. Intii uu ku maqnaa ayaa Boorsa yar oo Xaaji Itobiyaan u tiil hoostooda ayuu Matag uga dhax buuxiyay, xoogaa kadib ayuu Xaajigii kale ee Somaligu yiri: Anna ii banney dariiqa waxaan Doonanayaa “CocaCola”. Axmaarkii ayaa yiri: Iska fadhi Anigaa kuu keenayo, intii uu ku maqnaa ayuu isna Matag uga buuxiyay Boorsadii.
Markii Dayaradii istaagtay ee la dagayay, ayuu Xaajigii Itobiyaanku arkay Boorsadiisii oo Matag ka buuxo. Waa qeyliyay isaga oo leh: Goormeey dhamaane, Collaadaan noo dhexeeyso, xatta haddii aan dhahnay aan midoowno oo aad dekado na siiseen. Goormeey dhamanee in Xujaaydu, Boorsooyinka isaga matagaan, Cabitaankana “Kaadi” isagu soo daraan. ( F.S: 2aad)
(War collaadii in la joojinayo Dadka ma loo wada sheegay?. Ma wada aqbleen?. Mise waa la isa siriyaa?)
3- Reero Baadiyaha degganaa, oo Reer Guuraa ah ayaa waxaa ka xanuunsaday ,mid ka mid ah odayaashii. Meel fog ayaa Roob ka da’ay, waxaa la yiri: Halkaa ayaa loo Roob raacayaa oo Qofba tiisaa heysato ee odayga hala sii joogeen, Laba qof oo Qaraabadiisa ah iyo Wadaad yaasiimiyo haddii tii Alle u timaad. Odaygii Reerka u weynaa iyo Reerehii kale isma warsan, habeenkii ayaa la wada guureeyay. Waxaana ku haray Haweney kaliya oo ka mid aheed Reer guuraaga.Ar saas maxaa loo yeelay?
4-Libaaxyo Badan oo ugaarsi tagay oo aad u gaajoon ayaa helay Dammeer , mid Libaaxyadii ka mid ahaa ayaa soo jeediyay: in aan la cunin Dammeerkaan, lana xushmeeyo uuna iskala joogo, weyna ka aqbaleen, muddo markuu la joogay ayeey u direen Qaraabadiisii dammeeraha isaga oo taageero Fiican ka heysto Libaaxyada.
Markuu u tagay ayey Dammeerihii bilaabeen in ey ka cabsadaan , isagiina kii uu fahmi waayo ama ey is qabtaan waxa uu bilaabay in uu u geeyo Libaaxyada oo uu Casho sharafeed uga dhigo, kana nastaan Maalintaa Ugaarsiga duurjoogta.
Dammeerkina wuxuu isku heeystaa in uu yahay Libaax marka uu la joogo Dammeerada. Laakin waa Dammeerkiisii marka uu la joogo Libaaxyada. ( F.S: 3aad)
(Waddama badan oo Islaam ah ayaa la leeyahay waxaa loo soo diray, Dammeer Libaax. Islaamoow, ha leys fiir fiiriyo, Cirka fiinaa ku jiree)
5-Sucuudiga ayaa lagu qabtay tartan Qur’aan aqris ah, waddan kasta waxaa uga soo qeyb galayay Laba Ruux. Somaliya waxaa uga qeyb galayay sheikh Reer Baydhabo ah, qofkii kale ayaa baaqday, waxaa maqlay oo ka soo qeyb galay Nin Reer Gaalkacyo ah oo Sucuudiga ku shiiday, Qur’aankana aan aqoon.
Markii shiikhii Reer Baydhabo uu Qur’aanka si fiican u aqriyay ,ayaa Gudigii ku yiraahdeen Adiguna Aqri. Ninkii Reer Gaalkacyo Ooyin ayuu la dhacay Ooyin aan kala joojsi leheyn ayuu Bilaabay isaga oo leh: Saddaqa Laahul cadiim, Isaga ayaan la qabaa, waana siduu u aqriyay , waa sax.
( Somaliya,Shaqo Qof qabtay,maxaa Qof kale ku dalacay, ama kula daartay)
6-Nin ayaa Saaxiibkii ku yiri: Saaxiiboow Gabdhaa “Caasho Qurux” la yiraa ayaan rabaa in aan guursado ee ila tali. Waxa uu yiri: Ma waalatay, wallaahi, shalay ayaa u dambeeysay waxaan arkay iyada oo Nin Shumineyso oo dhudhunkaneyso. Ninkii Guurdoonka ahaa Gabdhii waa iska dhaafay,laakin Saaxiibkii ayaa Guursaday.
Guurdoonkii ayaa u yimid oo ku yiri: Saaxiiboow, maxaad ii khayaantay haddii aadba guursanee Gabadhii aad aragtay iyada oo Nin shuminee oo aad iigu dhaaratay in aad run ii sheegee? Waxa uu yiri: Saaxiiboow Run ayaan kuu sheegay waana arkay iyada oo Nin shuminee, waxa uuna ahaa Ninku Aabaheed. (F.S: 4aad)
( Nin Naaga Doon Qabo Naag ii doon lama yiraa, Nin Xildoon ahna Xil ila doon lama yiraa)